China Silenced Type Hydraulic Breaker LBS85 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Shengda
1.Ngwa ihu na-achọ nyocha onwe onye maka ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ.
2.Ha nwere ngwa oru na nyocha kachasị elu, oge nnyefe dị mkpirikpi
3.Strict usoro quality supervising, nwalee ọ bụla ngwaahịa tupu Mbupu
4.Izuola njikwa njikwa zuru oke, ISO9001: 2015
5.Product na-ezute ụkpụrụ European, yana asambodo CE.
6.The akwụkwọ ikike oge bụ otu afọ. Anyị na-ekwe nkwa na azịza elekere na elekere iri abụọ na anọ iji dozie. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị na-eziga ndị ọrụaka ọrụ iji dozie nsogbu ahụ.
1.Anyị na-ahọrọ ihe kacha mma: 40CrNiMo, 20CrMo, 42CrMo
2.Gụọ nkà na ụzụ na-ekpo ọkụ. Anyị nwere ụlọ ọrụ nlekọta ọkụ nke anyị na ọgwụgwọ 10 afọ 'ọgwụgwọ okpomọkụ
3.We nwere injinia izizi, ma ọtụtụ ndị ọrụ anyị nwere ahụmihe karịa afọ 5
Nọmba nlereanya LBS85
Ngwá ọrụ dayameta 85 mm
Nke gara aga: Akụkụ Typedị Hyddị Hydraulic Breaker LBS45
Osote: Top Type Hydraulic emebi LBS68
Hydraulic emebi Hammer N'ihi Sale
Onye na-emebi Hydraulic Jack Hammer
Hydraulic emebi Machine
Hydraulic emebi akụkụ ahụ